Moe Kai: One special person
အမြဲတော့လဲ ဘယ် တဲ့နိုင်ပါ့မလဲနော်။ သူနဲ. ကျမက အသွင်မတူတဲ့ သူနှစ်ယောက်ကိုး။ ဥပမာ ကျမက စိတ်အလွန်မြန်၊ သူက စဉ်းစဉ်းစားစား ဆင်ဆင် ခြင်ခြင်နဲ. နှေးကွေးသူ။ ကျမက စွန်.စွန်.စားစား အကုန်လုပ်ချင်၊ သူကျတော့ စိုးရိမ်စိတ်တွေများပြီး စိတ်ပူတတ်သူ။ ကျမက ရောက်ရာ အရပ် အဆင်ပြေသလို ကျိုးစားနေတတ်ပြီး၊ သူက မြန်မာ သတင်းလေးတွေဖတ်၊ မြန်မာ သီချင်းလေးတွေပဲ နားထောင်ပြီး မြန်မာကိုပဲ လွမ်းတတ်သူ။
ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲပဲ တူညီတဲ့ တခုကတော့ ကျမတို. အချင်းချင်း အမြဲ နားလည်မှု နဲ. တယောက်အပေါ် တယောက် အပြည့်အဝ ထောက်ခံ ရပ်တည်ပေး ခဲ့တာပါဘဲ။
အနာဂတ်ကို ကျိုမမြင်နိုင်ပေမယ့် ပျော်ရွှင်ဖွယ် နေ.လေးတွေကို အတူကျော်ဖြတ်ရပါစေလုို. ဆုတောင်းရင်း၊ ရောင်းရင်းအားလုံးလဲ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ. သေတပန် သက်တဆုံး ပျော်ရွှင်စွာ လက်တွဲနိင်ကြပါစေလို. ဆုမွန်ချွေရင်း ဒီစာကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။